देउसी-भैली खेल्दा बलिराजाले पठाएको किन भनिन्छ ? – Bihani Online
देउसी-भैली खेल्दा बलिराजाले पठाएको किन भनिन्छ ?
फाइलो भन्न छाडेर भैलो किन भनियो !
४ कार्तिक २०७४ ०१:५१ October 22, 2017 bihani
अझ यतिसम्म भन्न भ्याएका छन् कि दानव कुलका शक्तिशाली बलिराजाले इन्द्रको स्वर्ग कब्जा गरे । कहाँ छ त्यो स्वर्ग भन्ने ठाउँ ? कसले देखेको छ स्वर्ग ? यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठाउने गरिन्छ, गाई काटेर खाने मगरले के गाईको पुजा गरे होलान् र पञ्चायतकालसम्म रुकुमको मैकोटमा बकाइदा गाईको बलि चढाइन्थ्यो, मगर पुजारीद्वारा ।
दिदीबहिनी दाजुभाइको मिलनको चाड तिहारको रमाइलो पक्ष भैलो र देउसीको नाचगान हो । भैलो तथा देउसी खेल्न युवा र केटाकेटी मात्रै होइन, प्रौढ र पाका उमेरका मान्छेहरु पनि निकै रौसिन्छन् । टोली नाइकेले लय हालेर नाटकीय शैलीले भट्टयाउने र सहभागीहरुले भैलो तथा देउसीरे घन्काउँदै सामूहिक रुपमा नाँच्ने चलन नेपालको मौलिक विशेषता हो ।
नाँच्ने क्रममा यस घरको मन ठूलो छ, दान पनि ठूलै हुन्छ, भैलोलाई मुठीखोलेर दान दिन्छन्, मिठामिठा परिकार दिन्छन्, छानामाथि घिरौला के के दिन्छन् हेरौला भन्दै खुब फुक्र्याइन्छ । त्यसै क्रममा हामी त्यसै आएका हैनौं, बलिराजाले पठाएको भन्ने गरिन्छ ।
साँच्चै को थिए बलि राजा ? कुन मुलुकका हुन् ? अनि के संकट पर्‍यो ? नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आपत परेको बेला सिंह दरबार छाडेर नागार्जुन बास माग्ने अवस्था जस्तै भएको थियो तिनलाई ? कुन जुगका थिए ती ? कि जहिले पनि तिनले पठाको भनेर पैसा मागिन्छ ? हरेक तिहारमा यस्ता प्रश्न सबैका मनमा उठ्नु स्वभाविक नै हो । यसको उत्तर पाउन त्यति सजिलो छैन ।
भैली खेल्दा किन बलिराजाले पठाएको भनिन्छ त ?
हे भन–भन भाई हो फाईलो (भईलो–भैलो)
हे हामी त्यसै आएनै फाईलो (भईलो–भैलो)
हे बलिराजा (बलिहाङ) ले पठाका फाईलो (भईलो–भैलो)
बलिहाङको (मगर भाषामा हाङको अर्थ राजा हुन्छ) सम्मानमा तिहारको देउसी, भैलो सुरु भएको हो । इशाको १४ औं शताब्दीतिर वर्तमान पाल्ला जिल्ला बल्ढेङगढी गाविस क्षेत्रमा बलिहाङ रानामगरले स–साना मगर राज्यहरुलाई एकीकरण गरि शक्तिशाली राज्यको स्थापना गरेका थिए (राजाराम सुवेदी, २०६३, ८–९) उनको राज्यको सिमाना मगरात देखी भारतको गोरखपुरसम्म फैलिएको थियो । मगरातमा मगर अरमुडि राजा पछिका अर्को शक्तिशाली न्यायप्रेमी र लोकप्रिय राजाका रुपमा बलिराजाले शासन गरेका थिए ।
इतिहासविद् इमानसिंह चेम्जोङका अनुसार बलि राजाको पाल्पाको बल्ड्याङगढीदेखि भारतको गोरखपुरसम्म उनको राज्य फैलिएको थियो । तिहारमा देउसी भट्टाउँदा भनिन्छ, ‘त्यसै हामी आएका होइनौं, बलि राजाले पठाएको… ।’ ‘बलि राजा’ भनेकै राना मगरका वंश थिए । त्यसैले तिहार चाड मगरको हो भन्ने छ । यो चाड धेरैपछि मात्र हिन्दू दर्शनशास्त्रमा सम्मिलन हुन पुगेको हो ।
पश्चिमाञ्चल मगराँत क्षेत्रमा प्रचलित तिहार पर्वको मिथकमा संस्कृतिविद्, इतिहासकारहरुले लेखेका छन्, ‘बलिहाङ राना मगर (बलिराजा) न्यायप्रेमी, धर्मात्मा, भविष्यवेत्ता राजा थिए । रैतिहरुलाई यतिसम्म खुसी पारेका थिए कि उनको मृत्युसम्मको कुरासम्म सुन्न सक्दैनथे ।एकदिन बलिराजालाई मृत्युको दिव्य ज्ञान भएपछि जनताहरुलाई बोलाएर भनेछन्, ‘जसरी हामीहरु एकआपसमा मिलेर बसेका छौं, त्यसरी नै मिलेर बस्नु अब मेरो मृत्यु कातिक महिनाको औसीको रातमा हुँदैछ ।
यो खबर सुनेपछि सारा जनताहरु शोकमग्न भएर रुँदै कराउँदै कस्तो विपत आइलाग्यो भन्दै राजालाई बिन्ती गरे ‘तपाईलाई बचाउन के उपाय गर्न सकिन्छ ?’ त्यसपछि राजाले भने, ‘मलाई लिन काल आउँदा सबैको घरमा उज्यालो राखेर उनलाई अनुरोध गरी फकाउन सक्यौ भने म बाँच्न सक्छु ।’ त्यसपछि प्रजाहरु निकै खुसी भए ।
अनि राजाले भनेकै दिन यमराजले पठाएको काल, राजालाई लिन आउने बेला सबैले घरघरमा दियो बत्ति बालेर खान, पिउन छाडेर जागा बसेर फाइलो–फाइलो भट्याउँदै प्रार्थना गर्न थाले । काल आएर राजालाई लिन खोज्दा सबै रैतिले भट्याउँदै फाइलो–फाइलो भन्दै राजालाई नमार्न अनुरोध गरिरहेकोले राजाप्रति रैतिहरुको प्रगाढ सम्मान, त्यतिबेलाको कहालीलाग्दो वातावरणले गर्दा कालको पनि मन फिरेछ र राजालाई प्राणदान दिएर आफ्नो बाटो लागेछ ।
जनताले कालदेखि बचाउँदा भावविहल भई बलिराजाले ३ दिनसम्म खुसीयाली मनाउन आदेश दिएकाले त्यसदिन घरघरमा सबैले झिलीमिली बत्ति बालेर मिठो मसिनो खाए । आ–आफ्नै घरमा भएका दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट टिका लगाएर मासु, सेलरोटी, जाँडरक्सी पिएर रमाइलो गरे । उमंगको खुसीयाली साट्दै फाइलो–फाइलो भन्दै रातभरी खुसीयाली मनाए । मगर भाषामा फाइलोको अर्थ हामीले बचायौं भन्ने हुन्छ ।
बलिराजाको दीर्घायुको कामना गर्दै त्यही बेलादेखि देउसी भैलो खेल्न सुरु गरिएको हो । त्यतिबेला खुसीयालीमा निकै लामो नाँच सोरठी (ठूलो नाँच, नचरी) नाँचियो । त्यहीबेला सोरठी नाँच्नेहरुले बलिराजाको आख्यान जोडेर नाँच्न गाउन थालेको तिहार पर्व आजभोली फाइलो भन्न छाडेर भैलो भएको छ । त्यही फाइलो–फाइलो भन्ने शब्द अपभ्रश भएपछि कालान्तारमा भैलो हुन गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
तर, नेपालको हिन्दूसापेक्ष एकजातीय शासन सत्ताले हरेक संस्कृतिलाई हिन्दूकरण गरे झै फाइलो–देउसी अर्थात् हालको भैलोलाई पनि हिन्दूकरण गरेको छ । यो पर्व हिन्दूकरण हुनुको मुल कारण इतिहासकार तथा अध्येताहरु पनि तागाधारी र हिन्दूहरु भएकोले आफूलाई सजिलो हुने गरी सार्वजनिक गर्ने र त्यही अनुसार व्याख्या गर्नाले हो ।
सदियौंदेखि लाटा अनि एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट पिल्सीदै आएका र अध्ययन, खोज र अनुसन्धानमा खासै चासो नदिने मगर जाति र अन्य जनजातिकै कारण यस्तै मौलिक महत्व बोेकेका अनेकौं हाम्रा संस्कृतिहरु हिन्दूकरण भएका छन् । मगर राजाको इतिहासँग जोडिएको यस्तो ऐतिहासिक पर्वलाई तागाधारीले पुराण कथासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
उसो त उनीहरुले पनि बलिराजालाई दानी व्यतित्वका रुपमा व्याख्या गरेर जसले जे माग्यो, त्यही दिने अति उदार स्वाभावका भनेका छन् । अझ यतिसम्म भन्न भ्याएका छन् कि दानव कुलका शक्तिशाली बलिराजाले इन्द्रको स्वर्ग कब्जा गरे ।
कहाँ छ त्यो स्वर्ग भन्ने ठाउँ ? कसले देखेको छ स्वर्ग ? बलिहाङ राजा ईशापूर्व १४ औ शताब्दीका मगर राजा पाल्पाका थिए भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन् । उनले कहिल्यै स्वर्ग कब्जा गरेनन् र स्वर्ग भन्ने कस्तो हुन्छ उनले कहिल्यै देखेनन् न त अहिलेसम्म कसैले स्वर्ग देखेको छ ।
केही मगर इतिहासकार र अध्येताले यसलाई मगरको इतिहास बग्याउने प्रपञ्च हो भनेका छन् । बरु बलिराजाले पाल्पा आसपासमा भएका स–साना मगर राज्यहरु कब्जा गरेर शक्तिशाली र निकै दानी राजा भएर बसेका थिए जसमा एकमत छन्, इतिहासकार ।
तर त्यता नलागी हामी संसारमा अस्तित्व रहेको तत्वहरुमाथि छलफल गर्न सक्छौं । बलि हिन्दू पुराणमा उल्लेख प्रसिद्ध दानव राजा हिरण्य कश्यपका पनाती, प्रह्लादका नाति, विरोचन र सुरुचिका छोरा थिए भनिएको छ । यसमा सत्यताभन्दा किंवदन्ती बढी देखिन्छ ।
पुराण यथार्थसँग कतै गएर मिल्दैन । यो केवल काल्पनिक कथामा संयोगले बलि त्यहाँ जोडिन आइपुग्छन् । आधुनिक अनुसन्धानले देखाएको छ, स्वर्ग र नर्क नामको अस्तित्व पुराना धामिर्क पुस्तकहरु बाहेक अन्यत्र कतै छैन । यो ब्रह्माण्डमा केवल ९ वटा ग्रह मात्र छन् ।
ती ग्रहमध्ये एक पृथ्वी नामक ग्रहमा मानिसको बसोबास छ भने अन्य कुनै स्थानमा मानिसको बसोबास पाइएको छैन । अनि कसरी पत्याउने बलिराजाले ईन्द्रको स्वर्ग भन्ने राज्य कब्जा गरेको ? स्वर्गलोक, मत्र्यलोक, पाताल, महापाताल आदि त पृथ्वीका विभिन्न भूभाग र दिपहरु हुन् । तथापि पाल्पा राज्य त्यति बेलाको समृद्ध राज्य भएकोले त्यसलाई ‘स्वर्ग’ भनिएको त होइन, अध्ययनको विषय चाहिँ हुन सक्छ ।
बलिराजाले ३ दिनसम्म खुसीयाली मनाउन भनेकाले खास तिहार पनि ३ दिन मात्रै हुन्छ । ३ दिन नै यसलाई धुमधामसँग मनाइन्छ । अहिले लक्ष्मी पूजा भनेर मनाइने दिनदेखि नै तिहार पर्वको रौनक बढ्छ । यो हिन्दू लक्ष्मी पूजा हो या अन्य कुनै देवी धेरै खोजिनीति भएको छैन ।
तर, यस दिन औंसी अर्थात् कालरात्री पर्ने हुनाले त्यतिखेरको प्राकृतिक पुजक मगरहरुले यसलाई महत्व दिएका त होइनन्, सोचनीय छ । किन कि त्यतिन्जेल मगर समुदाय हिन्दूकरण नभइसकेको हुनाले समुदायत रुपमै हिन्दू देवी पुजिनु तर्क संगत देखिदैन । औंसीकै दिन बलिराजालाई काल लिन आएको विश्वास गरिन्छ ।
त्यही काललाई जीतेको दिनदेखि ३ दिनसम्म तिहार मनाइन्छ । केहीले हिन्दू मिथक र त्यसबाट सृजित मान्छेको वहिखाता राख्ने यमराज नभई बलि राजालाई लिन आउने त्यही समुदायले मान्ने अदृश्य शक्ति ‘काल’ हो पनि भन्ने गरेका छन् ।
तर यो पर्वमा इतिहासभन्दा पुराणमा प्रयुक्त हुने मिथकका रोमान्चकता बढी आउने हुनाले यो पर्व वास्तविक भएर काल्पनिकताको जगमा उभिएको जस्तै हुन गएको छ । मुलतः श्रुतिको आधारमा हिन्दू पृष्ठभूमिका अध्येताहरुले यो इतिहास लेखेको हुनाले तिनले आफ्नो मान्यतालाई यसमा मिसाउन खोज्दा यो एउटा कथा जस्तो हुन गएको छ ।
इतिहास जसको हातमा कलम छ उसैले हो लेख्ने । त्यसो गर्दा आफ्नो समुदायको स्वार्थ गाँसिन्छ नै । यो पर्वमा पनि त्यो देखिन्छ । चलाख इतिहासकारहरुले यो तिहार पर्वलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन यतिसम्म गरे कि ३ दिनको तिहारलाई आफ्नो धर्म यमपञ्चकसँग जोडेर व्याख्या गरे ।
मगरको सरोकार नै नभएको यमराजलाई त्यही घुसाइयो । मानिलिऊ, प्रकृति पुजक मगरले काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा , गोरु पूजा, भाई टिका लगाउने चलन चलाएका पनि होलान् । किन कि प्रकृतिपुजकहरुले सूर्य, चन्द्र, तारा, वायु र पशुपंक्षी लगायत वनजंगललाई खुसी राख्नुपर्छ भनी पुजा गर्छन् ।
तर सिन्धु घाँटी हुँदै भारतद्विपमा प्रवेश गरेका आर्यहरुले आफूभन्दा समृद्ध यो सभ्यतालाई काल्पनिक कथासँग जोडेर आदिवासीका संस्कृति र परम्परालाई वर्णशंकर बनाइदिएको करिब सबै इतिहासकारहरुको सहमति देखिन्छ । फाइलो त्यो राजनीतिबाट उम्कन सक्ने कुरै भएन ।
यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठाउने गरिन्छ, गाई काटेर खाने मगरले के गाईको पुजा गरे होलान् र ? पञ्चायतकालसम्म रुकुमको मैकोटमा बकाइदा गाईको बलि चढाइन्थ्यो, मगर पुजारीद्वारा । पछि तिनलाई पक्राउ गरिएको थियो । अहिले पनि रुकुम रोल्पाका मगरहरुले गाई काटेर खाने चलन बाँकी नै छ ।
सांस्कृतिक रुपमा पर्गेल्दा केही विदेशी अध्येताहरुले मगरको नेपाल प्रवेश तिब्बतबाट रुकुम हुँदै भएको भनेका छन् । त्यसो त अहिले गाईलाई माता भनी पुज्नेहरुले कुनैबेला यज्ञमै गाईको बलि दिइ मासु खाने गरेको शास्त्रमै भेटिन्छ । स्वर्गका देउता भनिएका ईन्द्रले समेत कलिलो गाईको मासु र सुराको वर्णन गरेका छन् । त्यतिबेला गाई, घोडा, हात्ति जस्ता प्राणीको बलि चढाइन्थ्यो ।
यो प्रचलन बुद्धकालसम्म भेटिन्छ । बुद्धले यज्ञका नाममा हुने प्राणी हत्याको विरोध गरेपछि उनीभन्दा क्रान्तिकारी देखिन त्यतिबेलाका पण्डितहरुले गाईलाई माता बनाई पुजा गर्न थालेका हुन् । (रजनीकान्त शास्त्री, हिन्दू धर्मका उत्थान और पतन)
इतिहासकार, अध्येता अर्थात कलम बोकेका तागाधारी लडाकाहरुले काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, गोरु पूजालाई आफ्नो शास्त्र अनुकूल व्याख्या गरी तिहारलाई यमपञ्चक भन्नु भनेको मगरहरुको मौलिक पर्वलाई तोडमोड गर्नु हो ।
अर्को कुरा फाइलोमै चलाइएको सोरठी नाँचलाई पछिल्लो समय हिन्दूवर्णाश्रममा आधारित बनाइएको छ । यो नाँच र गीतमा हिन्दू राजाको बयान गरिन्छ । तर, वास्तावमा यो नाँच तिनै बलिराजाको कथासँग जोडिएको छ । मगर राजाले स्थापना गरेको मगरको मौलिक पर्व तिहार हिन्दूहरुको मिथकस“ग जोडेर यम पञ्चक भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।
अझ पछिलो समय त यतिसम्म गरिएको छ कि भैलो–भैलो भन्न छाडेर भैलीको पछाडि राम थपेर भैलीराम भन्दै भट्टयाउने गरिएको छ । फाइलो–फाइलोबाट अपभ्रंश हुँदै भैलोसम्म आइपुग्यो । यदि मगरहरुले आफ्नो इतिहासलाई नखोज्ने, अनुसन्धान, अध्ययन नगर्ने हो भने कालान्तरमा हाम्रो पूर्खाहरुले भैलीराम नै भन्नेछन् ।
अनि मगर राजा बलिहाङले चलाएको एउटा ऐतिहासिक पर्व तिहारलाई पूरै हिन्दूकरण गरिनेछ र भनिनेछ– मगरहरु परापूर्वकाल देखि नै हिन्दू थिए । यदि गम्भीर नहुने हो भने दास बनाउने सबैभन्दा पुरानो र अहिलेसम्म चलिरहेको अचुक यो अस्त्रबाट मगर पहिचान धुलिसात हुनेछ । साभार : समाधान दैनिकबाट ।।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री देउवा
आज भाईटिका : टीकाको उत्तम साइत बिहान ११:५१ मा